Semalt: Ahoana ny fandefasana spam referrer amin'ny Google Analytics?
.wideAd, #subscribeNowSmallBarCnt, .nc-exp- (adiresy: none!);
Spam no fako nomerika izay tsy tianao hijerena, na aiza na aiza misy azy. Miezaka manararaotra ny mombamomba anao manokana izy, manintona vola avy amin'ny kaontinao banky amin'ny Internet ary mandefa viriosy sy malware amin'ny solosainao. Ireo mpitsikilo hitantana anao, na amin'ny alàlan'ny mailaka, fanehoan-kevitry ny blaogy, ny fitiavanao ny media sosialy, ary ny forums. Miaraka amin'ny Google Analytics, mora ny mametraka anarana ny bots of traffic spam izay manimba ny tatitra momba ny analytics ary manimba ny fanapahan-kevitra ara-barotra.
Inona no atao hoe spam referrer?
Ny spam referrer, fantatra amin'ny anarana hoe spam referrals, ny baomba mandatsa-dranomaso, ny spam log, spam crawler, dia ny môtô karazana fandaharam-pikarohana fikarohana izay ampiasain'ny web crawlers amin'ny adiresy fo diso fanamarihana mba hamerenana mitsidika ny tranokalanao. Miezaka manafina ny tenany ao ambadiky ny marika malaza ny mpikaroka ao amin'ny tranonkala ary mikasa ny hampino anao fa tranokala hafa no mamahana fomba fijery ara-dalàna ao amin'ny tranonkalanao. Ao amin'ny kaonty Google Analytics, afaka mahita ity vokatra ity ianao eo ambanin'ny lisitry ny anaran'ny fifamoivoizana. Raha hanamarina izany lisitra izany ianao, dia tokony kitihina amin'ny safidy Acquisition ary tsindrio avy eo ny safidy referrals. Google Analytics lisitr'ireo URL izay mandefa fifamoivoizana amin'ny tranokalanao.
Ahoana no hanasarahana azy ireo?
Eto i Alexander Peresunko, manam-pahaizana ambony indrindra avy amin'ny Semalt , dia hampiseho anao ny fomba hitadiavana sy fanivanana ireo bôgôl spam amin'ny fanodinana ny tranokalanao amin'ny ho avy.
1. Voalohany indrindra, tokony hamantatra ireo spambots amin'ny referrer ianao. Noho izany, tokony hanokatra ny kaonty Google Analytics ianao ary tsindrio ny fizarana Admin.
2. Avy eo, tokony tsindrio amin'ny safidy All Traffic ary tsindrio avy eo ny safidy Referrals. Raha hitanao ny lisitr'ireo tranonkala fitsangatsanganana tsy ara-dalàna, dia tokony hanangana ny sivana izay manakana ny botso tsy hiverina amin'ny tranokalanao ianao.
3. Tokony hifidy ny sehatra View ianao ny kitiho ny Filtres.
4. Ny dingana manaraka dia ny manindry ny safidy Add Filter ary mamorona filtre vaovao.
5. Tokony hanome anarana manokana ny filahanao ianao, toy ny spam referrer ho an'ny www.abc.com.
6. Ho an'ny sokajin'ny sivana, tokony tsindrio amin'ny safidy Custom
7. Aorian'izay, tokony hanaisotra ny fifamoivoizana sandoka ianao. Ho an'ny safidy fisakafoana fisakafoana, dia tokony ho azonao antoka fa sintominao ity ampahany ity. Azonao atao ny manamarina ny torolàlana fanohanan'ny Google ho amin'ny antsipiriany bebe kokoa.
8. Ny mpampiasa dia voafetra amin'ny tarehintsoratra 255 isaky ny sivana, noho izany dia tokony hampisaraka azy ireo ianao raha manana sariohatra spam maro sy karazana adiresy marobe ianao.
9. Raha vao namorona ny sivana ianao dia aza adino ny manindry ny bokotra Save raha alohan'ny famaranana ny varavarankely.
Azo atao ny manamarina ny filtres amin'ny fomba fiantraikany amin'ny fomba fijery mifototra amin'ny fifamoivoizana amin'ny tranokala. Tokony hijery matetika ny sivana ianao mba hahazoana antoka fa miasa tsara izy ireo. Miankina amin'ny habetsahan'ny fifamoivoizana azonao, azonao atao ny manamarika matetika ny lisitra referrals. Aza adinoina fa tsy mitsidika ny tranonkalanao ny spam referendra. Raha ny tokony ho izy, dia miteraka fomba fijery izy, ary ny taham-pifaliana dia 100%. Tokony hanakana ny spam ianao mba hiantohana ny fiarovana ny tranokalanao. Noho izany dia tokony hampidirinao ny filaharan'ny mpampiantrano valiny izay miankina amin'ny fanamarinana ny loharanon'ny fitsidihanao.